Home » Lahatsoratra farany farany » Vaovao Mafana » Vaovao farany mikasika ny Però » 32 no maty, 20 naratra raha nianjera tamin'ny hantsana any Però ny bus
Vaovao Mafana • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Vaovao • Vaovao farany mikasika ny Però • Safety • Tourism • Fitaterana • Travel Wire News • malaza ankehitriny • Vaovao isan-karazany
Mateti-pitranga ny lozam-pifamoivoizana any Peroa noho ny fitateran'ny mpitondra môtô, ny làlambe tsy voalamina tsara, ny tsy fisian'ny takelaka arabe ary ny tsy fitandremana fiarovana ny fifamoivoizana.
Am-polony no maty voadona tamin'ny bus bus.
Highspeed dia nandray anjara tamin'ny lozam-pifamoivoizana.
Ankizy roa no maty voadona.
Raha ny filazan'ny tompon'andraikitra peroviana, ny bus mpitatitra olona nitondra mpandeha 63 dia nilatsaka avy teny amin'ny hantsana akaikin'ny renivohitr'i Lima.
Farafahakeliny olona roa no maty ary 20 no naratra tamin'io fianjerana io. Ankizy roa - zazalahy enin-taona sy zazavavy telo taona - no isan'ireo mpandeha maty.
Ny fianjerana dia tany Però lozam-pifamoivoizana fahatelo nahavoa olona afaka efatra andro.
Tao amin'ny lalana tery amin'ny làlambe Carretera Central no nisy ny loza, 60 km teo ho eo atsinanan'ny renivohitra Lima. Mampifandray an'i Lima amin'ny ankamaroan'ny Andes afovoany ny arabe.
Nilaza ireo tompon'andraikitra fa ny "tsy fitandremana" no nahatonga ny fianjerana, satria nandeha “hafainganam-pandeha” ilay bus.
Raha ny fitantaran'ireo sisa velona dia nidona tamin'ny vatolampy izy io ary nilentika tany anaty hantsana 650 metatra ny halaliny.
Ny alahady lasa teo dia olona 22 no maty rehefa nifandona tamin'ny reniranon'i Amazon ao Peroa ny sambo roa. Isa tsy voafaritra mbola tsy hita.
Roa andro talohan'izay dia nisy bus iray hafa nianjera tany anaty hantsana iray tany atsimo atsinanan'ny firenena ka nahafatesana olona 17.